Bitcoin Debit Card FAQ - Bitcoin Credit Card Kuenzanisa 2018
Ndechipi bitcoin debit kadhi?
A bitcoin debit kadhi iri vhiza kana Mastercard kuti unokwanisa kushandisa kutenga zvinhu uye mabasa kubva paIndaneti uye is zvitoro kana ngavabude mari kubva ATMs. Panguva iyoyo kunotsigirwa zvakananga bitcoin mari. Bitcoin debit Makadhi kuita kuwana nyore kupedza cryptocurrency mari pose.
Ndezvipi debit nemakadhi bitcoin iripo?
Mapurasitiki bitcoin debit kadhi sokunge zvake vhiza kana Mastercard paunogona kushandisa imwe nzira. The rakapotsa bitcoin debit kadhi iri rakapa paIndaneti pamwe chete mashoko ari mwero debit kadhi. cardholder zita The, musi expiry uye CVC / CVV Codes anopiwa pamusoro kuitira, asi hapana phsyical kugadzirwa zvichiita nyore uye nokukurumidza kuwana mari.
Ndingashandisa kushandisa bitcoin debit kadhi?
Unogona kushandisa bitcoin debit kadhi sezvakangoita prefunded debit kadhi chero. Unogona kupedza pakuenzanisa kadhi yokutenga zvinhu uye mabasa ari dzeko zvitoro kana paIndaneti zvitoro. Kana uine mapurasitiki bitcoin debit kadhi, unogona kutora mari kubva ATMs. Unogonawo kushandisa bitcoin debit kadhi rako kuti kutenga zvose muno uye rese.
Ndezvipi mari Ndinogona kushandisa bitcoin debit kadhi?
Bitcoin debit Makadhi anobata mari rinowanika Fiat mari parutivi bitcoin. Chinonyanya dzakakurumbira mari ndiwo USD, EUR uye GBP. Currency inogona kuisa sezvo default mari chokuita kuti bitcoin debit kadhi uwandu, saka kwema zvinoitiswa kadhi vari anoratidzwa kuti mari. Vanechitsama rinobatsirwa kuzarura bitcoin debit misika kadhi mamwe mari uyewo. pakati vamwe, rinobatsirwa anopawo bitcoin debit makadhi default mari mu NZD, CNY, JPY, KRW, AUD uye CHF. Vamwe vanopa rubatsiro ane kusarudza kuti mari yacho kadhi altcoins pamwe parutivi bitcoin.
Ndingaita sei kurayira mumwe bitcoin debit kadhi?
Kuti ave bitcoin debit kadhi, unofanira kunonyoresa rimwe rinobatsirwa 'papuratifomu. Revavhoti kunosanganisira kupa pachavo mashoko ari cardholder, akadai zita, zuva rekuzvarwa uye nzvimbo mugari wemo. The kupiwa mashoko ngaibve achasimbiswa ane pikicha ID uye uchapupu dzokugara. Izvi zvinogona kuva bhiri ine Kero caldholder. Akariyanika Kurongeka uye kusarudza kutumirwa nzira mapurasitiki makadhi zvakakumikidzwa kumba kwako. Kana waita vasarudze rakapotsa kadhi, kadhi mashoko vari yakapiwa email address. Kana musingadi kugovana zvemunhu, unogona kugadzira imwe kusazivikanwa bitcoin debit kadhi pasina ongororo.
Ndinogona kuva bitcoin debit kadhi pasina ongororo?
Ehe. Anonymous bitcoin debit makadhi anowanikwa pana vaviri rinobatsirwa pamusoro musika. Kana usingade kuenda kubudikidza ongororo muitiro wokupa Photo ID uye uchapupu dzokugara, unogona kusarudza imwe kusazivikanwa bitcoin debit kadhi. Kana ichi zvisinei here kucherechedza kuti mwero kushanda kuti unverified vanoshandisa nguva dzose dzakaderera zvichienzaniswa rukasimbiswa vanoshandisa. Naizvozvo chete shoma mari inogona kushandiswa pamwe kusazivikanwa bitcoin debit makadhi mukutsinhana chete nokupa zita kuti uratidzwe pamusoro kadhi.
Nguva yakareba sei kuti vawane bitcoin debit kadhi?
Makadhi epurasitiki bitcoin debit vari wakabudiswa Visa kana Mastercard uye zvinotora inenge 2-3 mavhiki kugamuchira kwavari. Nguva kuwana kadhi iri zvichienderana chinhambwe pakati kadhi Provider uye cardholder. Nokuti dzimwe kupomera achitaura pakukurukura inogona kusarudzwa panguva dzose rinobatsirwa. Panyaya iyi makadhi zvakakumikidzwa mukati 2-5 zvebhizimisi mazuva yemabasa yakapiwa dhl pamwe Tracking nhamba.
Ndingaita sei top mumwe bitcoin debit kadhi?
Unogona top up bitcoin debit kadhi dzimwe nzira dzakawanda kupfuura bitcoin. Unogona kushandisa bhanga waya chinja, Mabhuku nemakadhi okubhengi uye nzira mubhadharo rubatsiro sezvo Neteller uye Skrill. Kazhinji Zvisinei PayPal haazi pakati akagamuchira mubhadharo nzira nokuda kwayo mashoko uye mamiriro.
Ndingaita sei ngavabude mari kubva bitcoin debit kadhi?
Unogona kutora mari kubva bitcoin debit kadhi dzakafanana nzira sezvo iwe kuremerwa nhoroondo. Unogona kutumira BitCoins mumwe kero. Munogona kutora mari rokubhengi kana kuti imwe nzira mubhadharo Provider, akadai Skrill kana Neteller. Kazhinji Zvisinei PayPal haazi pakati akabvuma kurega nzira nokuda debit nemakadhi bitcoin.
Ndinogona kutora mari kubva ATMs ane bitcoin debit kadhi?
Ehe. Unogona kutora mari kubva ATMs yose kushandisa mapurasitiki bitcoin debit kadhi.
mumwe bitcoin debit kadhi mutengo zvikuru sei?
The mitengo yacho bitcoin debit makadhi vari siyana munzvimbo rinobatsirwa. The imwe nguva issuance mutengo ane epurasitiki bitcoin debit kadhi iri pakati 5-25 USD. The issuance Mari rakapotsa bitcoin debit kadhi iri shoma zvikuru, unogona kunyange kuchiwana mahara dzimwe nzvimbo. Parutivi imwe nguva kugadzirwa Mari kadhi, munhu pamwedzi nhoroondo Nokuraramisa kubhadhara iri vanopomerwa uwandu 1 USD pamwedzi.
Ndezvipi kutengeserana mari kusonganirana bitcoin debit kadhi?
The kutengeserana mari yacho bitcoin debit makadhi vari siyana zvikuru, makadhi anodhura anogona maduku mutengapwe yechikoro. Rokukwidza kadhi iri kazhinji pachena, ukuwo withdrawals vari akarayira inobva mhando yaunosarudza. The Pos uye paIndaneti yakatengwa anogona kupomerwa yakatarwa muripo kana panguva prorata ndivo. ATM withdrawals vari mhosva pakati 1.5-2.5% por mutengapwe, withdrawals dzakawanda kutengwa. Pane chiri mari rokushandura kubhadhara iri mhosva kana default mari asingadi kuenzaniswa kutengeserana mari.
Ndezvipi miganhu ine bitcoin debit kadhi?
Mune zvimwe zviitiko pane kunonyanyisa uwandu Fund unogona Takudzai kuti bitcoin debit kadhi. Izvi ekushandiswa nemari unogona kupedza pamwe kadhi uyewo uwandu mari unogona abve ATMs. Rukasimbiswa vanozvishandisa vangava yepamusoro zvatinorambidzwa uye vamwe rinobatsirwa inopa parinogumira bitcoin debit kadhi kuti vakanyoresa vanoshandisa. The hwose topup havabvumirwi kumativi 2000 USD nokuti kusazivikanwa vanoshandisa.
Ndezvipi ATM kushaya mari yechikoro kusonganirana bitcoin debit kadhi?
Bitcoin debit kadhi rinobatsirwa mirairo yechikoro apo Kuregedzesa mari kubva ATMs. muripo Izvi zvinogona mhosva paminiti mutengapwe kana prorata. The mudzimba ATM withdrawals kazhinji mari kumativi 1.5%, apo yemarudzi ATM withdrawals vari mhosva pa 2.5%.
Chii chinonzi mari rokushandura kubhadhara chokuita bitcoin debit kadhi kwema?
Currency rokushandura kubhadhara iri mhosva kana default mari yezvinotaurwa chokuita bitcoin debit kadhi iri yakasiyana zvichienzaniswa currency of kutengeserana. In ichi Kana wakaiswa 3% mari rokushandura kubhadhara akapiwa nokuda ose rinobatsirwa pamusoro musika.